कसरी एउटा कडा पासवर्ड सिर्जना गर्ने: सुझावहरू र युक्तिहरू ग्याजेट समाचार
आज हामी पासवर्डले घेरिएका छौं। तिनीहरू आज हाम्रो दिनको अत्यावश्यक हिस्सा भएको छ, किनभने उनीहरूलाई धन्यवाद छ हामी हाम्रो खाताहरू, हाम्रो फोनमा पहुँच गर्दछौं र सम्भावित हमलाहरूबाट हाम्रो डेटा सुरक्षित गर्दछौं। धम्कीहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ भन्ने तथ्यका कारणले, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हाम्रो खातामा हामीसँग बलियो पासवर्ड छ। भाग्यवस, यो गर्नका लागि तरिकाहरू छन्।
हामीले देख्यौं कि कसरी खाताहरू मा आक्रमण वा ह्याकहरू उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। धेरै केसहरूमा, बलियो पासवर्डको अभावले यसलाई सजिलो बनाउँदछ ह्याकरहरु को लागी प्रवेश गर्न को लागी। तसर्थ, हामीले यस सम्बन्धमा उपायहरू लिनुपर्दछ र खातामा राम्रो कुञ्जीहरू राख्नुपर्दछ।
यदि हामी यो निश्चित गर्न चाहन्छौं कि हामीसँग हाम्रो ईमेल खातामा एक सुरक्षित पासवर्ड छ भने, हामी धेरै उपयोगी वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्छौं। यो मेरो पासवर्ड कसरी सुरक्षित छ बारेमा छ, जुन तपाईं यो लिंकमा भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। वेबले हामीलाई पासवर्ड प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ र यसलाई सुरक्षाको स्तर हेर्न सक्षम हुनेछ। त्यसैले यो एक धेरै उपयोगी उपकरण हो।
1 एउटा राम्रो पासवर्ड हुनुपर्दछ?
2 कसरी एक कडा पासवर्ड छ
3 अक्षर Use प्रयोग गर्नुहोस्
5 शब्द वा वाक्यांश प्रयोग नगर्नुहोस्
6 कुञ्जीपाटीमा रेखाचित्रहरू चित्रण गर्दै
एउटा राम्रो पासवर्ड हुनुपर्दछ?
बलियो पासवर्ड कुनै प्रकारको पासवर्ड मात्र होईन। आवश्यकताहरूको एक श्रृंखला पूरा गर्नुपर्दछ ताकि हामी यसलाई साँच्चिकै सुरक्षित रूपमा विचार गर्न सक्दछौं। यस अर्थमा यो सामान्य छ कि जब हामीले आफ्नो खाताको लागि पासवर्ड छनौट गर्नुपर्दछ वा सिर्जना गर्नुपर्दछ, हामी सजिलैसँग सम्झन सक्ने कुरामा शर्त लगाउँछौं, तर हामी अन्य धेरै पक्षहरू बिर्सन्छौं।
उदाहरण को लागी, पासवर्ड वास्तव मा मजबूत हुन को लागी, कम्तिमा १२ वर्ण लामो हुनु पर्छ। वास्तवमा त्यहाँ केही सुरक्षा विज्ञहरू छन् जसले यो सानो हो भन्ने सोच्दछन् र कम्तिमा १ 12 उत्तम प्रयोग गर्न सोध्छन्। त्यसकारण, १२ र १ characters बिचको क्यारेक्टरहरू केहि त्यस्तो चीज हो जुन हामीले प्रयोग गर्नु पर्छ खातामा। तर यो सामान्य छ कि प्रयोग गरिएको वास्तवमा छोटो हुन्छ। थप रूपमा, यो केवल लामो हुन लायक छैन, यसको सामग्री पनि आवश्यक छ।
सुरक्षित पासवर्ड हुनु भएकोले हामीलेaप्रयोग गर्नुपर्दछ अपरकेस अक्षर, साना अक्षरहरू, संख्या र अन्य केही प्रतीकको संयोजन। निश्चित रूपमा तपाईले यो देख्नु भएको छ कि वेब पृष्ठहरू यस प्रकारको संयोजन प्रयोग गर्न सोध्नु यो कसरी सामान्य छ। यस अर्थमा स्पष्ट परिवर्तनहरू गर्नुपर्दैन (जस्तै अक्षर E को लागीaनम्बर परिवर्तन गर्नु वा यसको विपरित)। ती कार्यहरूको प्रकार हो कि एक कुञ्जी कमजोर र त्यसैले ह्याक गर्न सजिलो। यद्यपि यस प्रकारका युक्तिहरू सहारा लिनु सामान्य छ।
हामी त्यो पनि भेट्छौं मिति वा नजिकका व्यक्तिहरूको नाम सधैं प्रयोग गरिन्छ। तपाईंको साथीको नाम र जन्म मिति जस्तै वा तपाईंको आफ्नै। यो तार्किक छ, किनकि यो कुञ्जी हो जुन हामीलाई थाहा छ हामी कहिले पनि सम्झने छौं। तर यो यो संभव गर्न सक्दछ तपाईंको नजिकका व्यक्तिहरूले यसलाई चाँडै पत्ता लगाउन र तपाईंको खातामा पहुँच गर्न। त्यसकारण यस किसिमका कुञ्जीहरू बेवास्ता गर्नु राम्रो हुन्छ, जसले अन्तमा समस्या निम्त्याउन सक्छ।
कसरी एक कडा पासवर्ड छ
हामीले बलियो पासवर्ड सिर्जना गर्नुपर्नेछया त Gmail वा फेसबुक खाताको लागि। तर यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि कोहीको पनि खातामा पहुँच छैन वा यसमा रहेको व्यक्तिगत डाटा। जब पासवर्डहरू सिर्जना गर्ने कुरा आउँदछ, त्यहाँ सँधै केही सुझावहरू वा जुक्तिहरू हुन्छन् जुन ठूलो मद्दतको हुन सक्छ। किनकि तिनीहरूले वास्तवमै सरल तरीकाले अनुमति दिन्छन्, राम्रो पासवर्ड सँधै समयको लागि, यसैले धेरै खतराहरूबाट जोगिन।
अक्षर Use प्रयोग गर्नुहोस्
यो त्यस्तो चीज हो जुन सँधै सहयोगी हुन सक्दछ, वास्तवमै साधारण तरीकाले। हामी अक्षर use को उपयोग गर्न सक्छौं हाम्रो पासवर्डहरूमा, ताकि सुरक्षाको बढाइएको छ। यो एउटा चिठी हो जुन सायद विरलै प्रयोग हुन्छ, यदि कहिल्यै नभएमा, कुञ्जीमा। त्यसोभए हामीलाइ त्यो खातामा प्रयोग गरिरहेको पासवर्ड फेला पार्न ह्याकरलाई धेरै गाह्रो बनाउँदछ। त्यसकारण यसमा चिठी राख्न सिफारिश गरिन्छ।
यस तरीकाले हामी यो सुनिश्चित गर्छौं कि हामीसँग एक सुरक्षित पासवर्ड छ। यी केसहरूमा सब भन्दा राम्रो कुरा एकल अक्षर प्रयोग गर्नु हो, एक शब्द नलेख्नुहोस्, तर यसलाई कुञ्जीमा अनियमित तरीकामा प्रविष्ट गर्नुहोस्। ताकि यसले हामीलाई अझ ठूलो सुरक्षाको लागि अनुमति दिन्छ, यदि शब्दहरू लेखिएका छैनन्, जुन डेसिफर गर्न सजिलो छ। साथै प्रतीकहरूको प्रयोगसँगै यो प्रयोग गर्नु भनेको उक्त पासवर्डको सुरक्षालाई राम्रो बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। जे होस् तपाईसँग सँधै किबोर्ड हुनुपर्दछ जुन यो उपलब्ध छ, जुन विदेशमा विकल्प छैन।
यो प्रतीक प्रयोग गर्न हामीलाई झन् झन् सामान्य हुँदै गइरहेको छ हामीले सिर्जना गरेका पासवर्डहरूमा। धेरै वेब पृष्ठहरूमा तिनीहरूमा प्रतीक हुनु आवश्यक हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि यिनीहरूको ठूलो सहयोगी हुन्छ जब हामीलाई कुनै पनि खातामा सुरक्षित पासवर्ड राख्नको लागि आउँछ। एक वा बढी प्रतीकहरूको प्रयोगले हाम्रो खाता ह्याक हुने सम्भावनालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसकारण आज यसको प्रयोग आवश्यक छ। थप रूपमा, ती मद्दत गर्दछ अधिक सरल पासवर्डमा साधारण पासवर्डहरू रूपान्तरण गर्न।
पासवर्ड जस्तो शब्द छान्नुहोस् जुन आज पासवर्डहरूमा धेरै प्रयोग गरीन्छ। यदि केहि प्रतीकहरू परिचय गराइएमा, यो क्रान्तिकारी तरीकाले रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, यसको सुरक्षा बढाउँदै:% * P455W0rD% @। यस अर्थमा सबैभन्दा चाखलाग्दो यो हो कि संयोजनहरू असीम छन्। त्यसोभए प्रत्येक प्रयोगकर्ताले एउटा छनौट गर्न सक्षम हुनेछ जुन उनीहरूका लागि सबै समयमा उपयुक्त हुन्छ। धेरै प्रतीकहरूको प्रयोगले यसलाई अधिक सुरक्षित बनाउँदछ।
शब्द वा वाक्यांश प्रयोग नगर्नुहोस्
यो त्यस्तो चीज हो जुन धेरै मानिसहरूले प्रयोग गर्दछन्, मैले आफैँ यो विगतमा केही पासवर्डमा प्रयोग गरें, तर यो गल्ती हो कि हामीले प्रतिबद्ध गर्नु हुँदैन। यो सामान्य छ शब्द वा वाक्यांश पासवर्डको रूपमा प्रयोग हुन्छ, वा पूरा नाम। यद्यपि यो धेरै तार्किक कुरा हो, किनकि हामीलाई थाहा छ कि यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीले एक सरल तरिकाले याद गर्न लागेका छौं, यो प्राय: सुरक्षित गर्नु हुँदैन।
सामान्य कुरा यो हो कि एक शब्द वा वाक्यांश, यदि हामी यसलाई केही प्रकार वा संख्याको प्रतीकहरूको साथ बाधा दियौं भने, यो ह्याक गर्न सजिलो हुनेछ। त्यसकारण, यो हामी सुरक्षित इच्छित सुरक्षित पासवर्ड होईन। हामी केहि प्रयोग गर्न सक्दछौं यदि हामीलाई लाग्छ कि यो सुविधाजनक छ, तर हामीले अघिल्लो भागहरूमा जस्तै गर्नुपर्दछ, कुञ्जीलाई रूपान्तरण गर्न प्रतीकहरू प्रयोग गर्नुहोस् वास्तवमा सुरक्षित छ कि एक मा।
कुञ्जीपाटीमा रेखाचित्रहरू चित्रण गर्दै
खातामा लिनको लागि अर्को विकल्प हो, जसले हामीलाई पासवर्ड याद नगर्न जोगाउन मद्दत गर्दछ, तथाकथितको प्रयोग हो किबोर्डमा रेखाचित्रहरू वा रेखाचित्रहरू। हामी विन्डोजमा नोटप्याड प्रयोग गरेर केही चित्रहरू प्रयोग गरेर आफ्नै रेखाचित्रहरू सिर्जना गर्न सक्छौं। यस तरीकाले, हामी पछि ड्रमलाई पासवर्डको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। यो एक विकल्प हो जुन केहि लोकप्रियता प्राप्त गर्दै छ, जबकि किबोर्डमा यस्तो ढाँचाको सिर्जना आवश्यक पर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी बलियो पासवर्ड सिर्जना गर्ने